Properties for Sale in Ahlone - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
ဆင္မင္းေဈးကြန္ဒို၊ 1800sqft, MB-2,BR-1,A/C, ျပင္ဆင္ၿပီး။
အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္မင္းေဈးကြန္ဒို၊ တြင္&a...
Ad Number S-10039565
Ad Number S-10038171
River View Point condo တြင္ အခန္းေရာင္းမည္
Ad Number S-10034691
🏬 အလုံ ကမ်းနားလမ်း River View Point ကွန်ဒို လူနေ ၊ ရုံးခန်းအတွက်သင့်တော်ပြီး လှပတဲ့မြစ်ရှုခင်း နဲ့...
🏬 အလုံ ကမ်းနားလမ်း River View Point ကွန်ဒို လူနေ ၊ ရုံးခန်းအတွက်သင့်...
Ad Number S-10032608
အလုံ ၊ Hill Top Vista Condominium (1570- Sqft) ရွှေတိဂုံဗျူး အလွှာမြင့်ရောင်းမည်
အလုံ ၊ Hill Top Vista Condominium &lt;br /&gt; (1570 - Sqft )MBR-2, B...
Ad Number S-10026034
SC5-002910, For Sales Royal Sinmin Condo, ကမ္းနားလမ္း အလုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၇လႊာ) (ျပင္ဆင္ၿပီး) ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း...
Ad Number S-10011880
Royal Sin Min Condo
3,870 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10043853
Ad Number S-10041424
Royal Power Land Real Estate &General Services Company Close
ပေအကျယ်(၁၂.၅×၅၅)၄ လွှာ (တတိယထပ်) အလုံမြို့နယ်တိုက်ခန်း_ရောင်းမည်
490 Lakh (Kyats)
09 441 999990/ 09 959 120000 / 09 255 743875
Ad Number S-10040282
IDEA Myanmar Property Real Estate Agent Close
အလုံမြို့နယ် ၊ Hill Top Vista Condo
Ad Number S-10036393
အလုံမြို့နယ် အလုံလမ်းသန့်အနီး 12.5×55 မြေညီထပ်အရောင်း
Ad Number S-10035310
(3200-sqft)အကျယ်၊ အလုံ၊ Orchid Condo, ပြင်ဆင်ထားပြီး ကွန်ဒိုအခန်းကျယ် ရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-10035203
Ad Number S-10033278